Dandira reRinganidzo dzeTaranyika
Muchidzidzo cheTaranyika, (Geography), nyika yakatarwa nemhando mbiri dzemitsetse. Kune mitsetse yakatarwa yakati sambamba neMutsazanisi inonzi latitude; kune mitsetse inotenderera nyika ichibata kuNorth pole neSouth pole inonzi longitude. Mitsetse iyi inoshevedzwa nenhamba dzakarongeka. Nhamba dzemitsetse yerumbariro dzinoveregwa dzichibva paMutsazanisi dzichienda kuNorth pole neSouth pole. Nhamba dzemitsetse yehunhungo dzinoverengwa dzichibva pamutsetse weGreenwich Meridian zvichienda kuMavirira nekuMabvazuva. Greenwich Meridian mutsetse welongitude unopfuura pedyo neRoyal Observatory, Greenwich, kuUnited Kingdom. Naizvozvo nzvimbo dzose dziri panyika dzine nhamba inotaura kuti nzvimbo iri papi mudandemutande remitsetse iyoyi. Ruzivo urwu ndirwo rwakashandiswa muhumhizha hweGPS, Geographical Position System chinova chombo chinobatsira kutaura kuti tiri papi uye kupa rudzivo (direction) rwenzvimbo yatinoda kuenda.
Chirongwa chekutarwa kwenyika nenzira yatsananguwa iyi chinodanwa kunzi Geographic Coordinate System - kuChiShona tochiti Dandira reRinganidzo dzeTaranyika kana kuti Dandira reMbariro neNhungo dzeTaranyika. Zita reChiShona iri rakaumbwa nenzira inotevera:
Ringanidzo (Coordinates) zvinoreva nhamba dzakarongeka dzinotevera mitaro yakatarwa dzinobatsira kuronda pane nzvimbo iri kutsvakwa.
Taranyika (Geography) - iri izwi riri kubva kumazwi ari kuEnglish anoti: geo rinoreva nyika (earth), uye graph rinoreva mutaro.
mitsetse yerumbariro yekurangarira
zimbabwe padandira rembariro nenhungo
Mutsazanisi uri pa 0o rumbariro. Rumbariro urwu rwakakosha nokuti ndirwo rwunotara pakati-nepakati penyika; Mutsazanisi uri nhambwe dzakaenzana kubva kuNorth pole neSouth pole. Mutsazanisi unosvikwa nemurazvo wezuva wakarurama (direct rays) panguva mbiri dze usikuhwakaenzana (equinoxes). Mazuva eusikuhwakaenzana anoitika March 20-21 neSeptember 20-21 apo nzvimbo dzose dziri panyika dzinowana usiku hwakareba 12h (maawa 12). Tsanangudzo izere inopiwa kuchikamu cheMwaka yepaNyika
Arctic Circle neAntarctica Circle dziri palatitude +66.5o ne -66.5o zvakaringana kudaro. Mitsetse miviri iyi inotara panotangira nzvimbo dzinowana 24h (maawa) erima pazuva rimwe mumwaka we chando (winter), uye 24h echiedza pazuva rimwe mumwaka wezhizha (summer). Nzvimbo idzi dzakakomberedza North pole ne South pole.